China KN95 Ukwenziwa kunye nefektri | Itekhnoloji yoNyango esekwe kubungqina e-Hebei
Uthotho lweewadi ezikrelekrele
Imaski ye-N95 yenye yeemaski ezisithoba ezikhuselekileyo eziqinisekiswe yi-NIOSH. “N” kuthetha ukunganyangeki kwioyile. "I-95" ithetha ukuba xa ifunyenwe kwinani elithile leengqungquthela ezithile zokuvavanya, ukuxinwa kweengqungquthela ngaphakathi kwimaski kungaphezulu kwama-95% ngaphantsi kweengqungquthela zengqungquthela ngaphandle kwemaski. Ixabiso lama-95% alikho i-avareji, kodwa ubuncinci. I-N95 ayilogama elithile lemveliso. Logama nje idibana nomgangatho we-N95 kwaye idlulisa uphononongo lwe-NIOSH, inokubizwa ngokuba yi "N95 mask". Inqanaba lokhuselo le-N95 lithetha ukuba phantsi kweemeko zovavanyo ezichaziweyo kumgangatho we-NIOSH, ukusebenza ngokusefa kwezixhobo zokucoca imaski kumasuntswana angenayo ioyile (njengothuli, inkungu yeasidi, inkungu yepeyinti, iintsholongwane, njl.) Ifikelela kuma-95%.
1. Isitayile esihle sokuyila kunye nokukhuselwa kwezinto ezininzi, ezinokucoca ulwelo ngokufanelekileyo kunye nokukhuthaza ivumba elikhethekileyo, uthuli, iibhaktheriya kunye neentsholongwane.
2. Ukucoca okunemigca emininzi, ukufikeleleka kolusu, ulaphu lwangaphandle olungalukwanga, umaleko onyibilikayo, kunye nococa ulwelo.
I-3.3D yokusika-ntathu inokulungisa ukulunga kunye nobuso, iphucule umphumo wokukhusela, ukugoba ngaphandle komthungo, ukutywinwa kwamasuntswana okungenanto, ukuwelda ngokugqibeleleyo, ibhendi ephezulu yelastikhi, uyilo lomzimba olubanzi alusenzakalisi ulusu, ixesha elide alikho ziqinile, kwaye unxibe ngakumbi ukonwaba.
4. I-electrostatic adsorption interlayer ingabonisa into, kunye namanqanaba angaphezulu okucoca ulwahlulo ngokukhusela impilo yokuphefumla.
Umsebenzi kunye nokuSebenzisa
Imaski ye-N95 inokusebenza kokucoca okungaphezulu kwe-95% yamasuntswana enobubanzi obusemoyeni nge-0.075µm ± 0.02µm. Ububanzi be-aerodynamic yeebhaktiriya zomoya kunye neefungus spores ikakhulu iyahluka phakathi kwe-0.7-10 µm, ekwindawo yokhuseleko lweemaski ze-N95. Ke ngoko, imaski ye-N95 inokusetyenziselwa ukukhusela ukuphefumla kwento ethile efana nothuli olwenziwe ngexesha lokusila, ukucoca kunye nokulungisa iiminerali, umgubo kunye nezinye izinto. Kufanelekile ukuba ulwelo okanye non-oyile non-oyile eveliswa ukutshiza. Umba othile wegesi eyingozi. Inokucoca ngokufanelekileyo kwaye ihlambulule ivumba elingaqhelekanga (ngaphandle kweegesi eziyityhefu), incede ekunciphiseni inqanaba lokuvezwa kwamasuntswana athile e-inhalable (anjengokubumba, i-anthracis, isifo sephepha, njl.njl.), Kodwa ayinakuphelisa usulelo lokudibana, ukugula okanye umngcipheko wokufa
Iindidi ze: Imaski ye-KN95 Eyabantu: Abasebenzi bezonyango okanye abanxulumene noko
Umgangatho: I-GB2626: 2006KN95 Inqanaba lokucoca: 99%
Indawo yemveliso: Iphondo le-Hebei Igama lebrand:
Umzekelo: Uhlobo lweNdebe Uhlobo lweentsholongwane:
ubukhulu: Isiqinisekiso Somgangatho: Ngaba
Beka ubomi kwishelufa: Iminyaka emi-3 Ulwahlulo lwezixhobo: Inqanaba 2
umgangatho wokhuseleko: Igama lemveliso: Imaski ye-KN95
izibuko: Izibuko laseTianjin uhlobo lokuhlawula: Ileta yetyala okanye udluliselo ngocingo
Beka imaski tyaba, tsala izandla zakho zicabalele kwaye uyityhalele ebusweni bakho, ngebhulorho ende yempumlo ngasentla; iingongoma eziphambili: gubungela impumlo, umlomo kunye nesilevu, beka umtya ongaphezulu wesigqubuthelo entloko, umtya ongezantsi emva kwentamo, kwaye ubeke iingcebiso zeminwe yakho kwikliphu yempumlo, zama ukwenza udini lwesigqumathelo lulingana nobuso.
Ukugcinwa kunye nokuQapha
1. Hlamba izandla phambi kokuba unxibe imaski, okanye uphephe ukubamba icala elingaphakathi kwimaski ngelixa unxibe imaski ukunciphisa ukungcoliseka kwemaski.
Yahlula ngaphakathi nangaphandle, phezulu nasezantsi kwemaski.
2. Musa ukuyicudisa imaski ngezandla zakho. Iimaski ze-N95 zinokwahlulahlula intsholongwane ngaphezulu kwemaski. Ukuba ucofa imaski ngezandla zakho, intsholongwane iya kuthi nkxu kwimaski ngamathontsi, eya kuthi ibangele ukuba usuleleko lintsholongwane.
3. Zama ukwenza imaski ilingane kakuhle ebusweni. Indlela elula yovavanyo yile: Emva kokubeka imaski, khupha ngamandla ukuze umoya ungavuzi esiphelweni semaski.
4. Isigqubuthelo sokhuselo kufuneka sinxibelelane ngokusondeleyo nobuso bomsebenzisi. Umsebenzisi kufuneka achebe iindevu ukuqinisekisa ukuba imaski ingena ngokuqinileyo kubuso. Iindevu nayo nayiphi na into ebekwe phakathi kwesigqubuthelo sobuso kunye nobuso kuya kubangela ukuba imaski ivuze.
5. Emva kokuhlengahlengisa indawo yemaski ngokwendlela obume ngayo ubuso bakho, sebenzisa iminwe yesalathiso sezandla zozibini ukucofa iklip yempumlo ecaleni komphetho ophezulu wesigqumathelo ukuyisondeza ebusweni.
Xa ezi meko zilandelayo zisenzeka, imaski kufuneka itshintshwe ngexesha:
1. Xa impedance yokuphefumla inyuka ngokubonakalayo;
2. Xa imaski yaphukile okanye yonakele;
3. Xa imaski nobuso zingenakuncamathiswa ngokusondeleyo;
4. Isigqumathelo singcolisiwe (njengamabala egazi okanye amathontsi nezinye izinto zangaphandle);
5. Imaski ingcolisiwe (isetyenziswa kwiwadi nganye okanye xa unxibelelana nezigulana);
Egqithileyo Impilo ekrelekrele konke kumatshini omnye
Okulandelayo: Isigqumathelo sebhandeji
Ezilahlwayo imaski yokhuseleko
Indlebe imaski imvelaphi inyuselwa khona
Idilesi: F / 10, i-Innovation Building, i-315, i-Changjiang Boulevard, indawo yoPhuculo lweTekhnoloji ePhakamileyo, iShijiazhuang City
Umnxeba: + 86- 15613301827